Kwidziridza Yako Inbound Kushambadzira neiyi Yekutungamira Generation Ongororo | Martech Zone
Isu takagovana yakazara chekuongorora pane inbound kushambadzira munguva yakapfuura iyo inotarisisa kune ese akasiyana masvikiro, nzira, uye mazano aunofanirwa kuendesa kune yakazara-inoratidzwa inbound kushambadzira zano. Asi haazi ese marongero ekushambadzira marongero aripo ekutora uye kushandura zvinotungamira pane saiti. Iyi infographic kubva kuDhijitari Kushambadzira Philippines inotarisa yakazara pa mutungamiri wechizvarwa tarisiro yeinopinda nzira yekutengesa.
Ipo kushambadzira otomatiki software pasina mubvunzo inowedzera mukana wevatengesi kuti vagadzire zvinongedzo zvakawanda uye zvirinani, uye zvakapetwa zvakapetwa kaviri pakukurukura netarisiro yavo, pane zvinhu zvakakosha izvo vashambadziri havafanirwe kukoshesa kuona kuti zano ravo pamwe nekuedza kwavo kuchazadzikiswa. Kana iwe uri kuronga kusvetuka yako wega inbound lead chizvarwa mushandirapamwe gore rino, saka inguva yakakwira yekuzviziva iwe nezvinhu izvi. Jomer Gregorio, Kushambadzira Dhijitari Philippines
Iyo infographic inotsanangudza matanho masere akasarudzika ekuti vashambadzi veadhijitari vanogona sei kuwedzera kwavo kutungamira kwekuedza.
Sarudza yako zvinangwa nezvinangwa.
Dhizaini yakanangwa kwazvo pamapeji.
Shingairira zvikorekedzo kana lead magineti.
Ita email funnels kukubatsira kutyaira rwendo rwetarisiro.
Capture inotungamira kubva migwagwa yemigwagwa.
Dhiraivha inotungamira kuburikidza kushambadza mameseji.
Kutanga kushambadzira zvakare mishandirapamwe kutevera uye kukwezva vashanyi vakasiya.
Ita email kukurudzira mabasa.
Tags: kushambadzaChannelsdigital advertisingdigital kushambadzira Philippinesemail kushandisa michinaemail faneraEmail Marketingemail kukurudziraemail kukurudzira mabasahooksinbound zvinangwazvinangwa zvinopindapamapejimutungamiri wechizvarwatungamira magnetskushambadzira zvakare mishandirapamwemigwagwa yemigwagwa